ဘားအတွင်းပိုင်း - ညွှန်ပြချက် - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ ဘားအတွင်းပိုင်း – ညွှန်ပြချက်
ဘားအတွင်းပိုင်း – ညွှန်ပြချက်
သြဂုတ် 25, 2019
အဆိုပါညွှန်ကိန်းအတွင်းပိုင်းဘားဆုံးဖြတ်သည်နှင့်၎င်း၏အမြင့် / အနိမျ့ခြေတစ်လှမ်း. ဒါဟာတံခါးပိတ်ဖယောင်းတိုင်ပေါ်တွင် အခြေခံ. ကြံစည်မှုဖြစ်ပါတယ် (redraw ပါဘူး). သေးငယ်ကာလအပေါ်ဘားတန်းအတွင်းမှဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားကာလကိုသတ်မှတ်စေခြင်းငှါ (အတွင်းပိုင်း bar ကိုရှာ) နှင့်တစ်ဦးပိုမိုသေးငယ်တစ်ခုပေါ်တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ.
အတွင်းပိုင်း bar ကိုရှာကာလ - အတွင်းပိုင်းဘားကိုရှာဖွေကာလ. တိကျတဲ့အချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားပါက, ရှာဖွေရေးကြောင်းကာလအတွင်းဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်.
ဘားအတွင်းပိုင်း – indicator isaMetatrader4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
ဘားအတွင်းပိုင်း – indicator provides for an opportunity to detect various peculiarities and patterns in price dynamics which are invisible to the naked eye.
ဘားအတွင်းပိုင်းကို install လုပ်နည်း – indicator.mq4?
အတွင်းပိုင်းဘား Download – indicator.mq4
ဘားအတွင်းပိုင်းမိတ္တူ – indicator.mq4 to your Metatrader Directory / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
အတွင်းပိုင်းဘားပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး – indicator.mq4
indicator အတွင်းပိုင်းဘား – indicator.mq4 is available on your Chart
အတွင်းပိုင်းဘားဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို – indicator.mq4 from your Metatrader4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးမဏ္ဍိုင်စတား - ညွှန်ပြချက်
Next ကိုဆောင်းပါးsH Bulls n Bears - ညွှန်ပြချက်